प्रेम विवाह गरेकी पूर्व मिस नेपाल उषा खड्गीको १७ वर्ष पछि डि’भोर्स हुनुको का’रण आफैँले खु’लाइन ! – Life Nepali
प्रेम विवाह गरेकी पूर्व मिस नेपाल उषा खड्गीको १७ वर्ष पछि डि’भोर्स हुनुको का’रण आफैँले खु’लाइन !
काठमाडौँ। पूर्व मिस नेपाल, उषा खड्गी र सञ्चारकर्मी जीपी तिमिल्सिनाको, वैवाहिक, सम्बन्ध, डि’भोर्सको स्थितीमा पुगेको छ । केही समयदेखि यी दुईको वैवाहिक जीवनमा खटपट परेपछि दुबै डिभोर्सको स्थितीमा पुगेको हल्ला चलेको थियो । अब यसबारे उषा आफैंले मुख खोलेकी छिन् । उषाले आफ्नो’ आधिकारिक फेसबुक ‘अका’उन्टमार्फत् यसबारे जानकारी दिएकी छिन् ।उ’षाले आफ्नो फे’सबुक मा’र्फत् यसबारे जान’कारी दिँदै ‘भनेकी छिन् , ‘यदि तपाईंले विवाहको १७ वर्षपछि पनि शा’रीरिक र मान’सिक या’तना सह’नुपर्छ’ भने यसलाई’ निरन्तरता दिन कुनै’ आधार छैन ।
अब म भन्छु ‘नो’ ।’ गएराती लेखिएको’ स्टाटसमा उषाले अगाडी’ थप्छिन् ‘तपाईंहरुको’ माया र समर्थनले मलाई बलियो र साहसिलो बनाएको छ ।यसैमार्फत् म मेरो र आफ्ना सन्तानको अधिकारका लागि ल’ड्नेछु ।’ जीपी र उषाको यसअघि पनि डिर्भोसको हल्ला बजारमा चलेको भएता पनि दुवैले वास्तविकता त्यो नभएको’ दाबी गर्दै आएका थिए । गएराती उषाले लेखेको ‘स्टाटस सहित’ दुई वटा भिडियो क्लिप पनि’ अपलोड गरेकी छिन् । जहाँ’ एउटा क्लिपमा उनी बोल्दाबोल्दै भ’क्कानियर रो’एको देख्न ‘सकिन्छ ।उषाको ‘पति जीपी तिमिल्सिनासँग विवाद ‘बढेपछि’ स’म्बन्ध’ बि’च्छेद’ गर्ने टुंगो लागेको हो । उनीह’रुबीच स’म्पत्ति बाँड’फाँडको ‘टुं’गो लाग्न मात्र बाँकी छ ।
उषा र जी’पीले अन्तर’जातीय वि’वाह गरेका हुन् । वि’वाहका लागि दु’वैले ठू’लो संघ’र्ष गरेका थिए । यो जो’डी निकै चर्चित र रो’लमोडल थियो । जीवी पनि टेलिभि’जन प्रस्तोता’ हुन् । दुवै सेलिब्रेटीले प्रेमविवाह’ गरेका थिए । छोराछोरीसहित सम्पत्ति’ बाँडफाँडको’ विषय नमिलेको हो । कुरा मिलेपछि कानुनी रुपमै स’म्बन्ध वि’च्छेदले अन्तिम रुप लिनेछ । दुवै अलग भइसकेका छन् । एक छोरा र एक छोरीका’ आमा उषाले १७ वर्ष लामो वैवा’हिक जीवन अन्त गर्ने निर्णय गरेकी हुन् । पतिसँग विवादपछि’ उनले जीपीसँगको कुनै तस्बिर बाहिर ल्याएकी छैनन् । विगतमा जीवीसँग उनले सामाजिक सञ्जा’लमा तस्बिर सार्व’जनिक गरिरहन्थिइन् ।
Previous हिमेस पन्तको भोट १० लाखले बढी छ, कसरी खबपुले जित्छ ?
Next वी:र्यको बतास”